Machining Center Manufacturers & Suppliers | China machining Center Factory
Vetikal igwe n'etiti na Atụmatụ: 1.The fuselage na isi mmiri dị elu ike igba ígwè, microstructure kwụsie ike, hụ na nkwụsi ike nke igwe ngwá ọrụ maka ogologo oge. 2.The kọlụm na ala nke A ụdị akwa ụdị Ọdịdị, jikọtara na nnukwu igbe isi, ukwuu belata vibration nke igwe na arọ ọnwụ 3.The tupu erughị ala nkenke bọl ịghasa drive 4.The elu ọsọ, elu ...
CNC igwe Machine Center XH7125
Vetikal igwe n'etiti na Atụmatụ: Jiri ike isiike mgbatị ígwè. X / Y / Z anyu na-ọnọ na akụkụ anọ ndu ụzọ plastic ihennyapade, edium ugboro quenching na kpomkwem scraping. Spindle si Taiwan na elu na-agba na nkenke. Dị amị na elu nkenke coolant usoro onwem na mgbapụta nke nnukwu eruba na elu inwego mgbapụta ka amụma mkpuchi ezu jụrụ n'okpuru elu-ọsọ ọnwụ ...
CNC igwe Machine Center XH7132A
CNC igwe Machine Center XK7132A
CNC igwe Machine Center XH7126
CNC igwe Machine Center XK7126
CNC igwe Machine Center XK7125
Vetikal igwe n'etiti na Atụmatụ: 1: Akpan mere maka machining obere-size akụkụ. 2: Nta CNC igwe na linear ndu na-ụzọ, ma lekwasị niile ọrụ dị ka nkịtị vetikal igwe center. 3: Ngwaọrụ ga-agbanwe na-akpaghị aka na elu na-agba na elu arụmọrụ. 4: CNC akara usoro: GSK983M, GSK218M, SIMENS 808D, SIMENS 808D tupu, FANUC OI ÒTÙ ỌLỤLỤ-MD; 5: nwere ike ịbụ na 4th axis ...
ekwe Machine , Metal lathe , Mpempe akwụkwọ Metal Machines, Universal lathe Machine , lathe Machine , lathe ,